samsung galaxy s7 vs htc imwe m10 zvinonhuwira: yekutanga specs kuenzanisa
Kuru Nhau & Ongororo Samsung Galaxy S7 vs HTC One M10 Perfume: yekutanga specs kuenzanisa
Samsung Galaxy S7 vs HTC One M10 Perfume: yekutanga specs kuenzanisa
Mafungu matsva emafoni eAndroid ari kuuya: Samsung, HTC uye LG ichafumura mafoni avo akanakisa munguva pfupi, uye nepo pasina kana imwe yavo iri yepamutemo, ruzivo rwakawanda nemifananidzo zvakatobuda kare. Uye kana paine utsi hwakawanda, panofanira kuve nemoto.
Iyo Samsung Galaxy S7 uye HTC One M10 (codenamed 'Perfume') kunyanya ndiwo maviri emafoni akasimba ayo achazopinda mumakwikwi akananga.
Iyo & apos; s yenguva yatinoenzanisa iyo Galaxy S7 maringe neHTC One M10 muhondo inotonhorera-yeropa yekuona izvo zvinounzwa nemumwe patafura.
Ndeipi foni yaunonyanya kufarira nezvayo?
Samsung Galaxy S7: S7 Edge HTC Imwe M10 PerfumeVote View MugumisiroSamsung Galaxy S7: S7 Edge 60.34% HTC Imwe M10 Perfume 39.66% Mavhoti 2610
# 1: Dhizaini uye kuratidza
Samsung yakaita kusvetuka kumberi neyakagadzirwa gore rapfuura payakaburitsa girazi nesimbi Galaxy S6. Mushure memakore efoni dzepurasitiki dzinofinha, Samsung yakazvimisikidza pachayo. Iyo Galaxy S7 haikundi & apos; haizove shanduko yechikuru icho chikero, asi haidi kuti ive: ichaunza zvishoma zvigadziriso zvinowedzera kugadzirisa dhizaini yeS6: ichawedzera makakomberedza kutenderedza mativi efoni kuti ikwane zvakanyatsogadzikana muruoko uye zvichaderedza saizi yekamera hump (asi kamera icharamba ichinamira kumashure zvishoma).
Izvo & maapuro; kukosha kuziva kuti Samsung ichafumura zvese zviri zviviri Galaxy S7 uye S7 Edge paMWC, nemusiyano mukuru uri wekuti iyo Edge vhezheni ine mbiri-kumucheto skrini, asiwo hombe, 5.5 'kuratidza uye rakakura bhatiri.
HTC, kune rumwe rutivi, yakagara iri kumberi-kumhanya kana zvasvika pakugadzira. Yaive pakati pekutanga kushandisa simbi mumafoni ayo uye dhizaini yayo yakahwina rumbidzo, asi panguva imwecheteyo, HTC ine mhosva yekuwedzera iyo inotyisa yekuwedzera mbishi pazasi pechiratidziro isina mabhatani uye isina mashandiro anoshanda kunze kwekubata iyo HTC logo.
Iyo HTC One M10 ichagadzirisa kusagadzikana uku, asi zvakare ichave kuenda kukuru kubva kune yazvino dhizaini yemureza M akateedzana. Ehe, ichave ichiri kugadzirwa nesimbi, asi zvapfuura iwo mairi epamberi-ekupfura masipika, uye kutaridzika kweM10 nyowani kunotarisirwa kufanana neiyo pane Imwe A9 zvakanyanya. Kwenguva yekutanga pane M akateedzana, kiyi yekumba chaiyo inooneka pazasi pechiratidziro, uye mikana ichave ine chigunwe chigunwe scanner, chinhu chakazove chakakosha nguva yekuwedzera.
Kana zvasvika pakuratidzira, iyo Galaxy S7 uye S7 Edge inonzi iine 5.1 'uye 5.5', ese aine Quad HD resolution, uye zvese zviri zviviri - zvakasikwa - pamwe neazvino chizvarwa Super AMOLED mapaneru. HTC, kune rumwe rutivi, inonzi inoshandisa 5.2 'Quad HD inoratidzira pane Imwe M10, asi izvo & apos hazvisati zvanyatsojeka kuti & apos; d ive AMOLED kana LCD pani.
# 2: Kuita: Snapdragon 820 uye kusasa kweExynos
MuUnited States, zvese zviri zviviri Galaxy S7 uye HTC One M10 zvinotarisirwa kuuya neQualcomm & apos; s new Snapdragon 820 system chip. MaBenchmark kubva kuSnapdragon 820 akatobuda uye i & apos; chikara: yekutanga tsika 64-bit CPU musimboti neQualcomm inozobata Apple & apos; s A akateedzana machipisi maererano neyakaenzana musimboti performance uye anonunura pane mamwe ese mafonti.
Izvo & zvakakodzera kuti titaure kuti mune mimwe misika, iyo Galaxy S7 uye S7 Edge ichauya neakasiyana chip, Samsung & apos; s Exynos 8890, inogona kuita zvirinani zvirinani. Uyu ndiwo musoro wekufananidza mune ramangwana, zvakadaro.
Ese ari maviri Galaxy S7 uye HTC One M10 anotarisirwa zvakare kuisa 4GB RAM, uye isu tine tariro kuti Samsung yakagadzirisa ayo eTouchWiz-ane hukama RAM manejimendi nyaya.
Adreno 530 ndiyo GPU inozotarisira iwo emagetsi uye emitambo mabasa paS7 neM10, uye isu tinotarisira kukwana kwakazara mune ichi chikamu zvakare.
Zvino, pane chekuchengetedza. Ose maviri anouya ne32GB yekuchengetera kwemukati, uye ese ari maviri anotsigira microSD makadhi. Isu & apos; tinonyanya kufara kuona kuwanda kwekuchengetedza nemakadhi e MicroSD achidzoka pane iyo Galaxy S akateedzana, mushure mekunge Samsung yadzika rutsigiro rwemakadhi muS6.
# 3: Makamera
Samsung yagadzira mamwe emakamera akanakisa pane mafoni munguva pfupi yapfuura, uye isu tinotarisira kuti iyo Galaxy S7 inosimudza ante. Panzvimbo pekuwedzera huwandu hwemamegapikiseli, ichawana kamera ye12-megapixel (iyo Galaxy S6 ine 16MP shooter). Ndeapi maapos anoita chibvumirano nezvazvo? Zvakareruka, mashoma megapixels anoreva kuti yega yega pikisheni yakakura uye inokwanisa kuunganidza mwenje wakawanda, saka iyi sensor nyowani inouya pamwe nevimbiso yeakanyanya nani akadzika mwenje kupfura. Ehezve, zvinotarisirwa ndezvekuti ichave neanowoneka kugadzikana (OIS) uye anokwanisa kurekodha 4K mavhidhiyo. Ndinovimba, ichave zvakare yekutanga Samsung kusave nemaminetsi mashanu-maminetsi pane 4K mavhidhiyo!
HTC, kune rumwe rutivi, yave iri njodzi chaiyo nemakamera ayo. Iyo UltraPixel pfungwa yakarira kuvimbisa, asi haina kumboburitswa, uye nepo iyi nyowani One M10 iri kutarisirwawo kuve ne'UltrPixel 'kamera, ichave sensor nyowani nyowani uye tekinoroji. Runyerekupe rwazvino runobvumirana kuti iyo HTC One M10 ichave neiyo IMMX377 sensor, imwe yemaseru makuru pane imwe foni uye imwe chete inoshandiswa paNexus 5X ne6P. Nhare mbiri dzeNexus dzakaratidza kuti sensor inotora mifananidzo inoshamisa, uye nesimba rekumanikidza reSpapdragon 820 chip, isu tinotarisira kuita nekukurumidza uye nekumwe kugadzirisa.
# 4: Hupenyu hwebhatiri
Hupenyu hwebhatiri mutengi & apos; s nhamba yekutanga kunetsekana mazuva ano, uye Samsung inoita kunge yakateerera: iyo Galaxy S7 ine runyerekupe kuti iuye nebheteri hombe, 3,000mAh bhatiri, asi iri iyo Galaxy S7 Edge iyo inonyatso enda nhanho imwe kumberi nehukuru , 3,600mAh bhatiri iyo inofanirwa kugara mukati memazuva maviri renji. Iine dhizaini imwechete yakamboshandiswa, isu tinotarisira kuti mabhatiri achavharwa uye kwete mushandisi-anobviswa.
HTC, pachayo, yagadzira mafoni anozivikanwa kuti anogara kwenguva yakati rebei. Hatizive chaiyo saizi bhatiri yeiyo Imwe M10, asi zvinotarisirwa ndezvekuti hupenyu hwebhatiri huchave hwakatangira HTC zvakare.
Samsung Galaxy S7 uye Galaxy S7 Edge inoshandura
# 5: Zvimwe: kumanikidza kuratidza kuratidza
Samsung iri kunyatso kuunza pfuti dzese pamwe neS7 nhepfenyuro: runyerekupe runoti rwuchawedzera kushorwa kwemvura nerutsigiro rwe IP68 certification (izvi zvinoreva kuti unogona kunyudza foni yako kusvika pamamita matatu-akadzika mvura kwenguva yakareba semaminitsi makumi matatu pasina kukuvara. ), asi izvo & maapuro handiyo chete inotonhorera nyowani nyowani. Iyo imwe hombe nyowani ficha yeS7 inonzi inoratidzira-inoratidzira kuratidza, yakafanana neiyo pane iyo iPhone 6s. Tinotarisira kuti ishande zvakafanana: pinda zvakanyanya kuti utore pop-up menyu kana zvimwe zvekuwedzera sarudzo. Samsung inofanira kubheka izvi mumapurogiramu ayo, asi mubvunzo mukuru ndewekuti zvichatora nguva yakareba sei vashanduri kuti vashandise chinhu chacho.
HTC, kune rumwe rutivi, inotorwa maficha kure: iyo inorumbidzwa, asi nzvimbo inodya mbiri pamberi-yakatarisana neBoomSound masipika anonzi anobviswa mune Imwe M10. Muchokwadi, kusvika parizvino, hatisati tanzwa nezve chero chinhu chakakosha icho chinonyatso wedzera kunhuwira kune yakajairwa Android smartphone ruzivo pane Imwe M10.
# 6: Mitengo uye mhedziso
Chekupedzisira, chii chichava mutengo weiyo Galaxy S7 uye HTC One M10? Kunyange pasina ruzivo rwepamutemo, tinogona kuita fungidziro dzakadzidziswa. Zvichienderana nemitengo yemafoni mumakore mashoma apfuura, heino mitengo inotarisirwa yeaya maviri:
Samsung Galaxy S7 32GB vhezheni: $ 650
Samsung Galaxy S7 Edge 32GB vhezheni: $ 750
HTC Imwe M10: $ 650
Zuva rekuburitswa kweGalaxy S7 inonzi yakagadzirirwa musi waKurume 11 muUnited States, uye runhare ruchaziviswa zviri pamutemo kuMobile World Congress muna Kukadzi 21. Samsung ichararama ichiitika uye isu tichava pane yekuratidzira pasi tichikupa kutarisa kwekutanga pane gadget nyowani.
Iyo HTC One M10, pachayo, inotarisirwa kuuya gare gare. Kufumurwa kwepamutemo kunonzi kwakagadzirirwa imwe nguva munaKurume, nepo zuva rekuburitsa chairo ringave muna Kubvumbi.
iphone 5c vs giraxy s4
t-nhepfenyuro yekuvhara mepu 2020
Double Tap vs Simudza vs Wave vs Izwi: kuongorora dzimwe nzira dzekumutsa foni
Maitiro eku skrini yako iPhone
Samsung Galaxy Tarisa 3 41mm vs 45mm: ndeupi saizi yaunofanira kutenga?
Maitiro ekudzima, kutangazve, kana kumisazve iyo Samsung Galaxy S21
Motorola inoregedza chechipiri-chizvarwa Moto 360 uye Moto 360 Sport?
Maitiro eGoogle ekumanikidza iwe kuisa iyo nyowani Google Kubhadharira app